February 14, 2020 - khitalinmedia
သူ့ကို ယုံတယ်၊ ကိုယ့် ကိုလည်း ယုံတယ်…
February 14, 2020 Khitalin Media 0
သူများကို ယုံတတ်လား? လွယ်လွယ်တော့ မယုံတတ်ဘူးလို့ ဖြေတဲ့ သူက များပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ လူ့စိတ်ဆိုတာ ဖတ်လို့ရပါတယ်။ လူ့စိတ်ကို ဖတ်နိုင်ခဲ့ရင်တော့ သူကလည်း ကိုယ့်ကိုယ် ယုံသလား၊ကိုယ့်ကလည်း သူ့ကို ယုံနိုင်သလားဆိုတာ သိနိုင်တာပါပဲ။ လူ့စိတ်ကို ဖတ်ရတာကလည်း ထင်ထားတာထက်ပိုလွယ်တယ်လို့ ပြောပါရစေ။ လူတိုင်းဟာ ကိုယ်နဲ့စကားပြောတဲ့ ဆက်ဆံနေတဲ့ […]
“ဖုတ်” ၀င်တယ်ဆိုပြီး သေတဲ့ အမေအိုတစ်ဦးရဲ့ အလောင်းကိုရင်ခွဲရုံမှာ စစ်ဆေးကြည့်လိုက်သောအခါ…
အမေဆာလို့ပါ သားရယ်တဲ့လား … တကယ်ဖုတ်မဟုတ်ဘဲ မိဘအရင်းကို ဖုတ်ထုတ်တယ်ဆိုပြီး ကိုယ်တိုင်ပဲ လုပ်သည်ဖြစ်စေသူတစ်ပါးကိုလုပ်ခွင့် ပေးသည်ဖြစ်စေ၊ အဲဒီသားသမီး ကိုယ်တိုင်မသိလိုက်သောပဉ္စာနန္တရိယကံကြီး ထိုက်ပါတယ်။ ဖုတ်ဝင်တယ်ဆိုပြီး အသတ်ခံလိုက်ရတဲ့ အဖွားတစ်ဦး ကိုယ်တွေ့လေ့လာဖူးပါတယ်။ (ဒေသနှင့်အမည်များမပြောပါ။) ဒီအနေအထားက သားသမီးတွေငြိုငြင်ရုံတင်မက မြန်မြန်ပင်သေစေချင်နေပါပြီ။ ကိုယ့်အညစ်အကြေးကိုတောင် ကိုယ်တိုင်မစွန့်နိုင်တော့ဘူး …။ ပြုစုတဲ့သူတွေကရွံတတ်တော့ ပိုဒုက္ခရောက်တာပေါ့။ […]
မွနျမာပွညျကိုပွနျလညျရောကျရှိပွီး ခဈြသူမြားနမှေ့ာ Surprise လကျဆောငျရရှိခဲ့တဲ့ ပနျကိတျဒါဒါ
ဒီနကေ့တော့ ခဈြသူမြားနဖွေ့ဈပွီး ပနျကိတျဒါဒါက သူမအနနေဲ့ ” ကိုယျတှေ FA ဆိုပမေယျ့လညျးValentine’s Day မှာ present ရပါတယျနျော။အဲ့ဒါ လာကွှားတာ ” ဆိုတဲ့ စာသားလေးနဲ့ လကျဆောငျလေးတှနေဲ့ အမှတျတရပုံရိပျလေးတှတေငျလာခဲ့တာပဲ ဖွဈပါတယျ။ ပနျကိတျဒါဒါ ရဲ့ အခဈြရေးကတော့ ပရိသတျတှစေိတျဝငျအစားဆုံးအခကျြလို့ ပွောရမှာပါ ခဈြသူဟောငျး […]
နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်း ဖေဖော်ဝါရီလ ၁၄ ရက်နေ့မှာ အမေရိကန် နဲ့ အခြားသောနိုင်ငံတွေမှာ ချစ်ခင်ရသူတွေအချင်းချင်း သကြားလုံးတွေ ချောကလက်တွေ ပန်းစည်းတွေ ပေးကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒီ Valentine Day ရဲ့ အဓိပ္ပါယ်က ဘာလဲ ? ဘယ်ကနေ ဆင်းသက်လာတာလဲ ? အခု ရှာကြည့်ရအောင်ပါ။ […]
ကြာသပတေး သားသမီးလေးတစ်ယောက်နဲ့ ချစ်သူဖြစ်နေပြီလား
ကြာသပတေး သားသမီးအများစုဟာ တစ်ယောက်ဆိုတစ်ယောက်ပဲ သူ့တို့စိတ်ထဲမှာ စွဲမြဲပြီး ချစ်တတ်ကြပါတယ်.. စိတ်ဆိုးစိတ်ကောက် လွယ်တယ်ဆိုပေမယ့်.. ကိုယ့် ချစ်သူ အပေါ်ပဲ နွဲ့ဆိုးဆိုးတာပါ.. သူစိမ်းဆိုရင် ကိုယ်မစားရရင် နေပါစေ.. သဘော မနော အရမ်းကောင်းကြပါတယ်.. ကြာသပတေးသားသမီးအများစုဟာ.. ဝမ်းနည်းတတ်တဲ့စိတ်ကိုအပြင်ကိုထုတ်ပြလေ့မရှိပဲစိတ်ထဲကပဲ ကျိတ်ပြီးဝမ်းနည်းလေ့ရှိတယ် ဒါပေမယ့် နှစ်သိမ့် ပေးမယ့်သူမရှိလည်းကိုယ့်ဘာသာ ဖြေသိမ့်နိုင်းစွမ်း […]
စစ်ကိုင်း တံတားပေါ်မှာ အလည်လောက် မီးရထားတစ်စင်း မီးလောင်…
Breaking News စစ်ကိုင်းတံတား(အင်းဝတံတား)ပေါ်မှာ အလည်လောက်မီးရထားတစ်စင်း မီးလောင်နေသည်ဟု ကနဦးသတင်းသိရသည် ။ credit zin moe unicode Breaking News … စဈကိုငျးတံတား(အငျးဝတံတား)ပျေါမှာ အလညျလောကျမီးရထားတဈစငျး မီးလောငျနသေညျဟု ကနဦးသတငျးသိရသညျ ။ credit zin moe
လက်ချောင်းတွေရဲ့ အနေအထားက ပြောပြနေတဲ့ သင့်ရဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအကြောင်း လူတစ်ယောက်ရဲ့ အမူအကျင့်ကို လက်ချောင်းလေးတွေရဲ့ တည်နေပုံကနေ အကဲခတ်လို့ ရပါတယ်။ သင့်လက်ချောင်းပုံစံလေးတွေနဲ့ တိုက်ပြီး စစ်ဆေးကြည့်နော်။ ဒီစစ်ဆေးမှုက ရာခိုင်နှုန်း(၉၀)လောက်ထိ မှန်ကန်တဲ့ သုတေသနစစ်တမ်းတစ်ခုကနေ ဆင်းသက်လာတဲ့ စစ်ဆေးမှုဖြစ်ပါတယ်။ လက်သူကြွယ်က လက်ညှိုးထက် ပိုရှည်နေရင် တကယ်လို့ သင့်ရဲ့ […]
ဘယ်လောက်ပဲ ကြံ့ခိုင်တဲ့သူဖြစ်ပါစေ အချစ်မပါတဲ့ဘဝကြီးက တခါတလေတော့ အထီးကျန်စေမှာပါ။ လူတိုင်း လူတိုင်းက ကိုယ်ချစ်ရတဲ့သူတွေနဲ့အတူ နေ့ရက်တိုင်းမှာ အမျိုးစုံသောချစ်ခြင်းတွေနဲ့ ဖြတ်သန်းနေကြပါတယ် …။ မိသားစုအချစ်၊ သူငယ်ချင်းအချစ်၊ ချစ်သူရည်းစားအချစ် အစရှိသဖြင့် ချစ်ခြင်းတွေထဲကမှ ချစ်သူရည်းစားအချစ်အကြောင်းကို အဓိကထားပြီး ကြည့်လိုက်ကြရအောင်နော် …။ ချစ်သူအတွဲ တော်တော်များများက အချိန်ကြာကြာ မတွဲဖြစ်တတ်ကြဘဲ […]
(1) သူ့ရဲ့ လည်ပင်းလေးကို ရှေ့သွားလေးနဲ့ အသာလေး ကိုက်ကြည့်ပါ …။ 😁💓 (2) သူ့ရဲ့ ရင်ခွင်ထဲမှာ မှီရင်း စကားလေးတွေ ပြောပါ။💑 ရံဖန်ရံခါ မကြာခဏ ဖက်ဖက်ထားပေးပါ …။ 😘 (3) မိန်းကလေးဖြစ်ပါက ကိုယ့် Bf ပေါင်ပေါ် တက်ထိုင်ပါ။😁 […]
သင့်မှာ လှပထူးချွန်ထက်မြက်ပြီး မိန်းကလေးချင်းတောင်အားကျရတဲ့ သူငယ်ချင်းမျိူးရှိပါလိမ့်မယ်။သူမအနေနဲ့ အချစ်ရေးအဆင်မပြေတာမျိူး၊အိမ်ထောင်ဖက်နဲ့အဆင်မပြေတာမျိူးကြောင့် စိတ်ညစ်နေရတဲ့အခါ သင်အံ့သြမိပါလိမ့်မယ်။အရာရာပြည့်စုံသော်လည်း သူ့ကောင်လေးနဲ့သူဘာလို့အဆင်မပြေရပါလိမ့်။ယောက်ျားလေးတွေရင်ဖွင့်ထားတဲ့ သူတို့ချစ်သူကောင်မလေးများအပေါ် စိတ်ပျက်ရတဲ့အကြောင်းရင်းတွေကို စုစည်းတင်ပြလိုက်ပါတယ်နော် … (၁) အမြဲစိတ်ညစ်နေတတ်သော မိန်းကလေး မဂ္ဂဇင်းတစ်ခုရဲ့ ကာဗာမှာ ရုပ်တည်တည်နဲ့ ဆက်ဆီကျနေသော မိန်းကလေးမျိူးထက် ပြုံးရယ်နေသော မိန်းကလေးမျိူးကို ပိုသဘောကျတတ်ကြသလိုမျိူးပဲ လက်တွေ့ဘဝမှာလည်း အမြဲစိတ်ညစ် […]